HDPE Geonet, Geocomposite Geonet, Drainage Geonet Supplier muChina
Tsanangudzo:HDPE Geonet,Geocomposite Geonet,Drainage Geonet,Composite Geonet,,
Home > Products > Geosynthetics > Geonets
Zvigadzirwa zve Geonets , isu tiri vashandi vanobva kuChina, HDPE Geonet , Geocomposite Geonet vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Drainage Geonet R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Yakasimba simba geonet yekunyorova kusimbiswa  Bata Ikozvino
Tri-kuronga Geocomposite filtration network  Bata Ikozvino
Hdpe 3D Composite Drainage Geonet In Landfill Network  Bata Ikozvino
HDPE Tri-dhizaini Composite Geonet yekudonha  Bata Ikozvino
3D Drainage Geocomposites Geonet ine PP Geotextile  Bata Ikozvino
Geocomposite Drainage Geonet inoshandiswa pasi pemvura  Bata Ikozvino
Kusimbisa Geonet HDPE epurasitiki gidhi  Bata Ikozvino
Yakakwirira mhando HDPE geocomposite drain geonet  Bata Ikozvino
Vatatu-Dimension Yakaenzana Drainage Geonet  Bata Ikozvino
HDPE Geocomposites Dhivha Geonet Ye Njanji  Bata Ikozvino
HDPE 3D Composite Drainage Geonet  Bata Ikozvino
HDPE 3D Composite Geonet  Bata Ikozvino
HDPE geonet inoshandiswa mumadhirowa  Bata Ikozvino
HDPE uye Plastiki Drainage Geonet  Bata Ikozvino
Plastiki 3d tridimension erosion kudzora geomat yekudzivirira yakadzika  Bata Ikozvino
3D geomat / Erosion control mat EM2 EM3 EM4 EM5  Bata Ikozvino
Geomat Ine UV Resistance  Bata Ikozvino
Yakakwira Tensile Pastic Kaviri-nzira Stretch Net  Bata Ikozvino
Green uye dema Geomat yeSlope Kudzivirirwa  Bata Ikozvino
yakakwirira simba Plastiki HDPE geonet CE121 CE131 CE151  Bata Ikozvino
Packaging: Kutenderedza kana kudzoreredza chikumbiro chemutengi
HDPE Geonet Chigadzirwa Tsananguro MaGeonets akagadzirwa neakakwira-density polyethylene (HDPE) uye iyo ultravioresistant mumiririri nenhumbi yekukwegura kuramba uye erosion kuramba. Drainage Geonet inogona kushandiswa senge rudzi rwekuzadza matenga...
Packaging: Kutenderedza kana kudzosera chikumbiro chemutengi
Geocomposite filtration network composite yedhireni network Composite yedhireni Geonets Sumo Three-dimensional abudise ematongerwo rezvebonde mumwe-divi matatu abudise geonet composited maviri tsono-chibhakera geotextiles dzisiri dzakarukwa. Kupa...
Hdpe 3D Composite Drainage Geonet In Landfill Network Composite geonet tsananguro Iyo mitatu-dimension drainage Geonet rudzi rutsva rwezvinhu geosynthetics zvinhu . Iyo mitatu-yemhando chimiro inoumbwa neyepakati geonets , inonamira tsono pamativi...
HDPE Tri-dhizaini Composite Geonet yekudonha Composite Drainage Geonet Nhanganyaya Tri-dimension composite geonet yekudonha mvura inogadzirwa neakasarudzika matatu-dhimiro geonets adhibited nonwoven geotextile pamativi ese. Iyo ine chivakwa che...
3D Drainage Geocomposites Geonet ine PP Geotextile HDPE Drainage geonet Tsananguro Matatu- emhando yemubatanidzwa Geonet imhando nyowani yekudonha geosynthetics zvinhu . Nepamusoro density polyethylene (HDPE) sezvinhu zvakasvibirira, mushure mekuita...
HDPE Geonet Tsananguro 3D composite drainage geonet tri-dimension composite geonet yedhireni yakagadzirwa neyakasiyana yehutatu-dhimasi geonets yakaumbirwa nonwoven geotextile pamativi ese. Iyo ine chivakwa che geotextile (kusefa basa) uye geonet...
Kusimbisa Geonet HDPE epurasitiki gidhi HDPE Geonet Sumo MaGeonets akagadzirwa neakakwira density polyethylene (HDPE) uye anti-UV mawedzero, anti-kukwegura. Iyo ine humwe husimbe hwekusimba uye kugara kwenguva refu, kugadzikana kwemakemikari, kupisa...
Yakakwirira mhando HDPE geocomposite drain geonet Geonets Sumo HDPE Geonet inogona kushandiswa muvhu nyoro kusimbisa, kusimbisa musimboti, embankment pamusoro nyoro nyoro, gungwa dziviriro dziviriro uye reservoir pasi kusimbiswa, etc. Drainage...
Packaging: Pe filam, mucheka wakarukwa
Vatatu-Dimension Yakaenzana Drainage Geonet Nhatu-Dimension Compound Drainage Net Kuzivisa: Matatu-Kupimha Geocomposite Geonet yakagadzirwa nehupamhi-density polyethylene (HDPE) uye yeiyo ultravioresistant mumiririri nenzvimbo yekukurira kupokana...
HDPE Geocomposites Dhivha Geonet Ye Njanji HDPE Geocomposite Geonet Tsanangudzo: 3D composite geonet inogadzirwa yakasarudzika tri-dimension geonet yakabikwaNonwoven Geotextile Fabric pamativi ese. Iyo ine chivakwa che geotextile (kusefa basa) uye...
HDPE 3D Composite Drainage Geonet HDPE 3D Drainage Geonet Nhanganyaya: HDPE 3D Composite Drainage Geonet yekudonha mvura inogadzirwa neakasarudzika tri-dimension geonet yakavakirwa geotextile pamativi ese. HDPE 3D Composite Drainage Geone t ine...
HDPE 3D Composite Geonet HDPE 3D Geocomposite Net Sumo: HDPE 3D Composite Geonet rudzi rutsva rwezvinhu geosynthetic zvinhu. HDPE 3D Composite Geonet inoumbwa neyepakati geonet, yakanamatira sindano pamativi ese maviri yakagadziriswa isina-yakarukwa...
HDPE geonet inoshandiswa mumadhirowa HDPE geonet inoshandiswa mumadhirowa Sumo: HDPE geonet inoshandiswa mumadhirowa inogadzirwa neyepamusoro -density polyethylene (HDPE) uye iyo ye Ultravioresistant mumiririri. Drainage Geonet Unhu : 1.Aging...
Kupa Mazano: 1,000,000m2
HDPE uye purasitiki yekudonha geonet HDPE uye Plastiki Kudhira Geonet Tsananguro Isu tinokwanisa kuburitsa ese emhando dze geonet , seTatu-emhando yemapurasitiki ekudhiza geonet , HDPE drainage geonet , plastiki drainage geonet . HDPE uye Plastiki...
Kupa Mazano: 3-10days per 40ft container
Plastiki 3d tridimension erosion kudzora geomat yekudzivirira yakadzika Nhanganyaya plastiki geomat ndimambo wemutsva 3D maumbirwo geotechnical synthetic zvinhu, anoiswa kuchengetedza mvura nepasi, kuwedzera nzvimbo yekusvibirira, uye kugadzirisa...
3D geomat / Erosion control mat EM2 EM3 EM4 EM5 Nhanganyaya 3D Geomats yakagadzika tri-dimension net chimiro, inogadzirwa nehupamhi-diki yepurasitiki geonet ichikwenya pamwe. Nzvimbo yeGeomet haina kuenzana, iyo inonzi zvakare Erosion control mat ,...
Packaging: Firimu rePF pamativi ese
Geomat Ine UV Resistance Geomat Tsananguro Geomat mhando yeGeonets, inoshanda seiyo basa rekudzivirira, iyo Yakagadzirwa kubva kune thermoplastic resin uye UV inopokana nekuwedzera munzvimbo matanda, diamondi uye hexagon net chimiro. Composite...
Yakakwira Tensile Pastic Kaviri-nzira Stretch Net Yakakwira Tensile Pastic Kaviri-nzira Stretch Net Tsanangudzo: Yakagadzirwa kubva ku polyethylene ne extrusion process uye yakatambanudza tekinoroji, saizi yegomba rakakomberedzwa-rakapetwa munzira...
Packaging: mativi maviri akafukidzwa nePF firimu
Green uye dema Geomat yeSlope Kudzivirirwa Green uye dema Geomat yeSlope Kudzivirirwa Nhanganyaya: Green uye dema Geomat yeSlope Kudzivirirwa yakagadzika tri-dimension net chimiro, inogadzirwa nehupamhi-diki purasitiki geonet ichikwenya pamwe chete....
Geonet Tsanangudzo: HDPE Geonet Yakagadzirwa kubva kune thermoplastic resin uye UV ichiramba ne extrusion ikaiswa mukwere , Iyo geonet yepurasitiki ine madhaimani nehexagon net chimiro. Rondedzero : CE121, CE131, CE151, DN1, HF10 Property: 1....
China Geonets Vatengi
Geonet yakagadzirwa kubva kune thermoplastic resin uye UV inopokana nekuwedzera munzvimbo matanda, diamondi uye heagon net chimiro. Ne-anti-kukwegura, kupesana nekorasi uye humwe hunhu. Inogona kushandisa zvinobudirira nzira huru, njanji subgrade mutoro kugovera, kuvandudza hwaro kubereka kugona uye kusimba, kuwedzera hupenyu. Kurara munzira yakatetepa, kunogona kudzivirira kudonha, kudzivirirwa nevhu, kunongedza nharaunda. Iyo yekuchengetedza, rwizi yedziviriro yekudzivirira kuiswa inogona kudzivirira zvinobudirira kudonha kwemvura muinjiniya yemahombekombe; nekushanduka kwayo kwakanaka, kwakanaka kubvumirwa kucushion kukanganiswa kwesimba remasaisai.
1. Yunifomu chimiro, inogona kutakura yakanyanya kudzvinyirira.kudziridza mugwagwa wekubereka huwandu, kuwedzera hupenyu hwayo
2. Anti-kukwegura, chengetedza dhamu uye dombo pamusoro kubva kumakemikari kucheka uye gungwa mvura corrode
Rwizi rwebhangi uye madziviriro emadhamu; kurapwa kwemakungwa; tunaki chirongwa uye yakajairika nyoro kusimbiswa kwevhu.